dhimis, goos goos goos ah, dixiriga dixiriga, gearboxyada meeraha ah, xawaare yareeyayaasha, kala duwanaanshaha, qalabka helical, gearsooyinka bevel sprial, gearboxes beeraha, cagaf cagafyada, gawaarida xamuulka, dixiriga dixiriga
Wax soo saarka gaarka ah
Xarumaha HZPT waxay ka gudbeen shahaadada ISO 9001. Xarumaheena waxsoosaarka ayaa ka gudbay shahaadada TS 16949.
U adeegso fikradaha caatada ah dib u qaabeynta hababka ganacsiga si aad u baabi'iso tallaabooyinka aan qiimaha ku kordhin
Samee iskaashi ka yimaada macaamiisha illaa silsiladda wax soo saarka
+ Dib-u-dhicis hoose oo xagal-dirxi ah oo dirxi ah
+ Kala duwanaanshaha xawaaraha UDL
+ Dixiri dixiriga
+ Qalabka dhimista qalabka loo yaqaan 'Cycloidal gear gear'
+ Gearbox loogu talagalay mashiinnada beeraha
+ Sanduuqyada meerayaasha
+ Matoorrada ku habboon geeska
+ Gawaarida gawaarida gawaarida ah
+ Gearboxes-yada loogu talagalay traco & auto
+ Gawaarida khaaska ah & sanduuqyada
+ Gearboxesyada nidaamka waraabka
+ Howlwadayaasha dixiriga & Bevel Gear
+ DC cabir yar oo matoorro ah
+ Nidaamka Gudbinta ee fiicni TMR
+ Dhimista SMR Shaft Mounted
+ Shirkadaha meerayaasha ah
+ Qalabka giraanta
+ Qalabka giraanta Helical
+ Qalabyada kala duwan
+ Fallaadha Spline & fallaadhihii geerka
+ Spur gears & qalab geelleel ah
+ Gooryaanka dirxi & dixiriga
+ Bears gears & geesaha berial sprial
+ Gacanta Torque
+ Qalabka PTO
+ Cagaf cagafyo
+ Qalabka forklift
+ Qalabka rakiban
+ Gears loogu talagalay bambooyin saliid ah
+ Wareegga Swing / Sleewing dhalista
+ Bambooyin Gear ah
+ Nidaamka wadista korantada
+ Y2 matoorada taxanaha
+ Y matoorada taxanaha
+ Taxane YD matoorrada xawaare badan
+ YS matoorada taxanaha
+ YC YL matoorada taxanaha
+ YEJ matoorrada
+ Qaybaha Mortor
+ TYGZ matoorro isku mid ah
+ Matoorrada iskudhafan ee TYBZ
+ Qalabka Servo
+ Burushyada matoorrada dc
+ Gawaarida Electirc
+ Matoorrada dhifka-Dunida-Joogtada ah (REPM MOTORS)
HZPT waa Khabiir ku takhasusay sameynta noocyada kala duwan ee qalabka & qalabka & xawaaraha hoos u dhiga sida: NRV dixiriga dixiriga (NMRV dixirigoodu dixiriga), Qaadista dixiriga dixiriga birta ah, hoos u dhigga xawaaraha marsho-jeex jeex jeex jeex jeex jeex jeex jeex jeex jeexjeexa leh, helical dixiriga dixiriga dixiriyaha, hoos udhigga gadaal-u-jajabinta hoose, Gawaarida xagasha midig ee xagal-celinta, qalabka gawaarida beeraha, gawaarida gawaarida, gawaarida gawaarida, sanduuqyada meeraha,…
Isugeynta ganacsiga, warshadaha iyo tikniyoolajiyadda guud ahaan, Hangzhou Ever-power Makiinado Co., Ltd waa shirkad soosaarayaasha xawaareeyayaasha Shiinaha iyo warshad dhimista qalabka, waxaan ku takhasusnay soosaarida xawaaraha hoos udhaca, sanduuqa marsada, qalabka diirimaadka diirran iyo sanduuqyada. Waxay u heellan tahay inay bixiso xal gaar ah, hufan iyo bini-aadamnimo gudbinta.
Macluumaadkaagu halkan ayuu u socdaa. Beddel ama ka saar qodobkan qoraalka ah ama modulka Mabaadi'da Mawduuca. Waxaad sidoo kale sharxi kartaa qayb kasta oo ka mid ah mawduucan ku jira moduleka qaabeynta design iyo xitaa adeegso CSS caadadiisu qoraalkaan ku yaala module-ka Module Advanced.
Qalabaynta marawaxadaha aan caadiga ahayn WKS
Taxanaha WJ dixiriga-xawaaraha dixiriga-ga ah waa sheeko cusub, muuqaalku waa qurux, yar yahay, culus yahay xilliga la soo saarayo, gudbinta is-beddelka leh, buuq yar ayaa leh. Waxay si toos ah ugu midoobi karaan mashiinada korantada ama mashiinka wax dila ee awl ee meeraha taxanaha UD, qaabdhismeedku waa mid is haysta. Soo saarida dixiriga dixiriga ee daloolka, iskudarsiga isticmaale qallafsanaanta iyo foorarsiga dariiq kaliya, sidoo kale wuxuu isku qasan karaa qalloocinta labka ah oo iskiisna usaaraya, Waxaa jira dabacsanaan weyn.
Udl kala duwanaanshaha xawaaraha nmrv dixiriga dixiriyaha abuurka qalabka biraha loo yaqaan 'cycloidal yanjistayaasha' oo tuuraya qalabka dixiriga dhoobada birta ah
Waxaa naga go'an inaan horumarinno nolosha dadka iyo bay'adda iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad wax soo saar wax soo saar leh oo lagu kalsoonaan karo, hufan oo ammaan ah.
Shirkadaha bixiya badeecooyinkan iyo adeegyadan waxay isku halleeyaan inay naga caawiyaan xallinta caqabadaha maareynta awoodda korantada, hydraulic, iyo farsamada ugu adag adduunka. Sababtoo ah waligeen illoobi mayno waxyaabaha muhiimka ah. Shaqadeenu waa inaan hubino inay si sax ah u shaqeyso.
Engineer R & D Xirfadleh
Shirkad u hoggaansan ujeeddada maamulka ee tayada marka hore, haybad sare.
24 × 7 taageerada adeegga waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican shirkadda.
24 × 7 taageero adeeg ah oo bixinaysa adeegyo tayo leh wakhti kasta, meel kasta oo adduunka ah.
Faahfaahin dheeraad ah, fadlan hubi buugaagta alaabtayada iyo liisaska mashiinnada.
Raadi faahfaahin farsamo si aad u xulato oo aad u iibsato alaab
Waxaan kaa caawin doonnaa rakibidda iyo hawlgelinta duurka.
Dayactir / Beddel
Baadh dhibaatooyinka oo cadee ficilada sixitaanka.
WAA MAXAY GEAR GEAR, SOO JOOJI?
Adduunyada gudbinta awoodda mashiinka, waxaa jira qaybo badan oo dhaqaaqa, waxyaabona si dhakhso leh ayey u sii murgi karaan. Qeyb aad muhiim ugu ah nidaamyadan ayaa ah sanduuqyada loo yaqaan 'gearboxes' - mashiinno isku dhafan oo awoodda ka wareejiya ra'iisul wasaaraha una gudbiya culeys. Gear-yareyaasha ayaa ah diiradda koowaad ee qodobkan.
Lixda mashiin ee aasaasiga ah, fudud, sanaadiiqda ayaa sida caadiga ah adeegsada Wheel iyo Axle iyo / ama Screw (dixiriga dixiriga) si ay si hufan ugu shaqeeyaan iyagoo helaya faa iidooyin farsamo. Mootooyinka waxaa sida caadiga ah loogu talagalay inay ku shaqeeyaan “kacdoonno daqiiqad kasta” ama RPM iyo, halka xawaarahaan lagu hagaajin karo iyadoo la adeegsanayo Wadayaasha Kala Duwan ee Kala Duwan, xaalado badan waxaa ka sii faa iido badan in la isticmaalo dejin, habeyn gaar ah oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo xawaaraha wax soo saarka isla markaana kor loogu sii qaadayo tiirarka.
Tusaale ahaan, haddii mootadu rogmato 1800 RPM, oo mootadaas ay ku xiran tahay 10: 1 gareeye hoos-u-dhige ah, hoos-u-dhiguhu wuxuu soo saari doonaa 180RPM. Haddii mootadaas oo kale ay leedahay qiime xaddidan oo xaddigeedu dhan yahay 30 lb.ft., markaa wax soo saarka ka yimaada 10: 1 soo-dejiye (haddii loo maleeyo qiimeyn wax ku ool ah oo ah 85%) wuxuu noqon doonaa 255 lb.ft. iyadoo la siinayo koror ballaaran oo ku saabsan xaddiga shaqada la qaban karo. Codsiyada guud ee noocan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwa wax rarta, halkaasoo awoodda wax soosaarka ay u baahan tahay xawaare socod gaar ah iyo xaddiga kororka si alaabada looga wareejiyo meel ka mid ah loona wareejiyo meel kale.
Wax soo saarkayagu badanaa waa loo dhoofiyaa Japan, Mareykanka, Jarmalka, Koonfur-bari Aasiya iyo dalal iyo gobollo kale. Macaamiisheena waxaa kujira macaamiil badan oo OEM ah oo ku takhasusay mashiinada dhismaha. Waxaan iskaashi la yeelanay dhowr ka mid ah shirkadaha Fortune 500 si aan u noqono mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee keena shiidaalka Shiinaha.
Waxaan u dhoofinay alaabadayada macaamiisha adduunka oo dhan waxaanan kasbanay sumcad wanaagsan sababtoo ah tayada alaabteena ka sareysa iyo adeegga iibka kadib. Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisha dal iyo dibadba inay nala soo xiriiraan si ay ugala xaajoodaan ganacsiga, macluumaadka isu weydaarsadaan oo ay noola shaqeeyaan.
Waxaan shaqaale u nahay in kabadan 1500 oo shaqaale ah, waxaanan leenahay mashiinada leexinta cnc iyo xarumaha shaqada cnc.
waxaan nahay mid ka mid ah soo saaraha ugu fiican iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha, dooro soo-saarayaasha tayada leh, alaab-qeybiyeyaasha, dhoofiyaasha china-reducers.com
SU'AALO CAADI AH OO KU SAABSAN DIIDAYAASHA GEAR
Markay timaaddo nidaamyo ku lug leh qalabka wax yareeya, waxaa jira laba su'aalood oo caadi ahaan soo baxa.
"Sideen ku xushaa waxyaabaha ugu yar ee shaqadeyda hoos u dhiga"
“Waxa aan hadda haysto si fiican uma shaqeynayo. Sideen ku heli karaa nidaam ka wanaagsan kan hadda jira?
Labada su'aaloodba waxay ku soo dhacayaan in qof aqoon iyo khibrad sax ah leh kaa caawiyo dhismaha nidaamkaaga ugu habboon. Haddii aad qaybiyaha tahay, waxaan jeclaan lahayn inaan kaala hadalno baahiyahaaga qalabka wax ka dhima, haddii aad u baahatana qaybiyaha, waxaan jeclaan lahayn inaan mid kugu xirno.
Qalab yareyaashu waa dhib badan yihiin laakiin xulashada midda saxda ah maahan inay noqoto. HZPT waxay leedahay xulasho ballaaran oo tayo leh, oo la isku halleyn karo, kana jareysa qalabka marshada oo ku habboon baahida beeraha, isu geynta, saliidda iyo gaaska, saadka, macdanta iyo waxyaabo kale oo badan!